Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha aan la qorin
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha aan la qorin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; "Studger". Dabeecadeena Daniel Sturridge ee Carruurta iyo faahfaahin la'aanta Cilmi-baarista xaqiiqooyinka waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa, haseyeeshee yar ayaa ka fikiraya nooca Daniel Sturridge Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Daniel Sturridge wuxuu ku dhashay maalinta 1st ee September 1989 ee Birmingham, Boqortooyada Ingiriisku Grace Sturridge (hooyadii) iyo Michael Sturridge (aabaha), labadaba asal ahaan Jamiciya.
Wuxuu ku koray Hockley, Birmingham. Waxa uu ahaa jawi uusan marnaba iloobi doonin ciyaaraha kubadda cagta ee garoonka dhexdiisa, isagoo kubad hareereynaya beerkiisa hore ee gurigiisa iyo dhamaan guriga.
Caruur kasta oo xaafadda ku yaala way jeclaan jireen.
Daniel Daniel Sturridge: Wiilka qof walba qalbigiisa
Daanyaan wuxuu jecel yahay Hockley sababtoo ah waxay ahayd meel wanaagsan oo lagu noolaan karo iyo meel uu siiyay xaqiiqda meesha uu maanta joogo.
Koritaanka Daagaan, Da'da Daanyeel waxay haysatay waalidiin aad u ilaaliya. In uu erayadiisa; ...."Hockley waxay qabatay dambi kale, hooyadeyna ma rabin halkaan, aabahayna waa isku mid. Anigu waxaan ku jiri lahaa wakhti cayiman maxaa yeelay waxaa jiray rabshado badan oo ku hareeraysan aagahayaga. Walaalkeyga weyn, Leon, kuma jirin wax rabshado ah, waxaana uu xaqiijiyay in aan ka fogaaday noloshiisa oo dhan. Waxaa muhiim ah in la fahmo in aad ku noqon kartid meel ka mid ah aag-dambiyeedka. Waan ka mahdinayaa Ilaah in aan awooday in aan ka baxo jawigaas oo aan naftayda ka dhigo. "
Markii uu ka yimid asal ahaan kubada cagta, Daniel wuxuu ogaa in aabihiis iyo adeerkiis ay doonayaan inay riyadoodii sii wataan. Is-beddelka, wuxuu lahaa markab hagar hore ah iyo ilaaliye iyaga ka yimid. Aabihiis, Michael wuxuu sameeyay jacaylkiisa si uu u muujiyo fiidiyowgiisa wiilkiisa Pele. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay Daniel uu xiiseynayay kubada cagta.
Erayada Daanyeel ee ..."Aabahayga wax badan ayuu iigu tababaray beerta, waxaan soo saarnay koontooyinka iyo eeyooyinka markasta oo nagu soo jeeda. Wuxuu i tusay fiidiyowyo badan oo Pele ah. Waxa uu i tusi lahaa xirfadaha waxaanan tagi lahaa beerta hore ee isku dayaya in ay sameeyaan. "
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xirfadda Soo-koobista
Sturridge wuxuu bilaabay xirfadiisa kubada cagta isagoo da'diisu tahay lix jir ka tirsan naadiga Cadbury Athletic. Waxa loo tababaray lana socdaa aabihiis iyo walaalkiis. Tani waxay siisay bilow bilow ah kubadda cagta.
Daniel Sturridge Hooyo Hore: Maalmaha Shaqada Hore
Wuxuu xilli ciyaareedkii oo dhan ku qarash gareeyay 1995 / 1996 kooxda ka hor inta aan la ogaanin da'da 7 jir ee akadeemiga kooxda Aston Villa. Waxa uu Villa ka tagay afar sano ka dib inuu u dhaqaaqo Coventry City, halkaasoo uu ku biiray Akadeemiyada Manchester City ee 2003, oo ah 13.
Sanadka soo socda, wuxuu ahaa gooldhaliyihii ugu goolasha badnaa taariikhda kubada cagta, waana ciyaaryahanka kaliya ee ku guuleysta Tevez, Carlos Tevez, sida City ay ku guuleysatay Nike Cup, oo ah tartanka ugu weyn adduunka ee 15.
Laga bilaabo bilowgii xilli ciyaareedkii 2006-07, Sturridge wuxuu bilaabay inuu tababar la qaato kooxda koowaad ee City.
Xilli ciyaareedkii 2007-08, Sturridge ayaa noqday ciyaaryahankii kaliya ee abid ugu goolal dhaliya FA Cup, FA Cup iyo Premier League isla xilli ciyaareedkan. Tani waa diiwaan aan weli la isku mari karin ilaa maanta.
Dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2008-09, taageerayaasha Manchester City ayaa u codeeyay Sturridge inuu yahay ciyaaryahanka da'da yar ee Manchester City xilli ciyaareedkan, taas oo uu ugu abaalmariyay qoyskiisa iyo adeerkiis Dean.
Iyadoo Sturridge uu qandaraaska uu kula joogo Manchester City uu ku egyahay, waxa uu u saxiixay heshiis afar sanno ah oo uu ku qaadanayo 3 July 2009. 31 January 2011, Sturridge ayaa ogolaaday inuu ku biiro Bolton Wanderers heshiis amaah ah ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. Wuxuu saameyn ku yeeshay Bolton.
2 January 2013, Sturridge ayaa dhameystirtay heshiis ka yimid Chelsea ilaa Liverpool, isagoo saxiixay qandaraas muddo dheer ah oo ah heshiis aan la shaacin oo la aaminsan yahay inuu ku sugan yahay £ 12 million. Inta kale ee ay sheeganayaan hadda waa taariikh.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Qoyska
Daniel Sturridge wuxuu ka soo jeedaa taariikh nololeed qoys. Wuxuu ka mid yahay Jamaica, dhammaan awoowayaashiisuna waa Jamaica sida Raheem Sterling.
DAD: Michael Sturridge wuxuu ahaa nin xirfadle ah ka hor inta uusan dhalan.
Erayga Daanyeel ah, ... "Markii aan koray, wuxuu ahaa mid ka mid ah tababaraha oo i hagayay, wuxuu iga caawiyay inaan noqdo wax aan maanta ahay. Tababarenimo la'aan iyo arag la'aantiisa iyo maalmaha iyo saacadaha uu ilaashado, aniga ahaan ma ahan ciyaaryahan aan maanta joogo. Walaalkeyga wuxuu i baray wax kasta oo aan ogahay.
Michael Sturridge walaalkiis waa Simon, Dean, David iyo Derek iyo Carl Sturridge. Walaashiis waa Ava Sturridge-Packer CBE.
Hooyo: Dumarka Daniel ayaa aad diirada u saaray waxbarashada. Waxay rabtay inuu diiradda saaro dugsiga sababtoo ah waxay ka shaqeysay iskuul. Taasi waxay u weynayd iyada.
Daniel Sturridge iyo hooyada Grace Sturridge
Ma ahan oo keliya Daanyeel oo awood u leh in uu wax cuno duufaan beerta cayaaraha, laakiin garoonka dhexdiisa ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah dabka gacantu ku jirto ee jikada, sidaa daraadeed sidaas darteed qoyska Sturridge ayaa furay makhaayad Caribbean Birmingham, halkaasoo uu ku dhashay iyo halka waalidkiis weli ku nool yihiin.
Waxa uu noqon doonaa hooyada Sturridge, kaas oo uu sheegay in uu saameyn ku yeeshay jacaylkiisa cunto wanaagsan iyo karinta.
UNCLES: Sturridge waa xiddiga hore ee kubada cagta Dean iyo Simon Sturridge.
Daniel, adeerkiis, Dean ayaa horay u soo ciyaaray muddo toban sano ah oo uu la qaatay Derby County, shan sano oo ay ku jirtay Premier League. Uncle Simon ayaa u soo baxay Stoke City, halka Daanyeerka Daniel uu u ciyaaray Finland. Dean, Simon iyo Michael Sturridge oo labadoodaba ay wada lahaayeen xirfadahooda xirfadeed ee isla wakhtigaas.
Sida laga soo xigtay Daniel ..."Waxay u jiheysteen jidka aniga oo aan eegay markii aan yaraa. Waan ku faraxsanahay inaan arko adeerkaygii Derby iyo walaalkay kale oo u ciyaara Stoke. Waxaan daawaday aabahayga oo ku ciyaara Betamax guriga dhexdiisa, wuxuu i tusay ciyaarihii hore markii uu ciyaarayay Finland. Waxa uu dhaliyay goolal fiican oo fiican. "
Gabar: Daanyeel wuxuu leeyahay walaalo ka weyn Leon Sturridge. Ma uusan xiiseynin kubada cagta maalinba maalinta ka danbeysa. Waa ilmo yar oo wiilkiisa Michael iyo Grace Sturridge.
Daniel marnaba wuxuu sheegay in waligiis uusan waligiis walwal u lahayn isaga iyo Leon. In uu erayada ..." Leon marwalba wuxuu ahaa 100 boqolkiiba taageere. Ma jirto hinaaso. Taasi waa wax walba, kaliya ma ahan kubada cagta. Ma jirto hinaasid aqalkayga, taasina waa hal shay oo waalidkeenu marwalba ina baray marnaba. Had iyo jeer waxaa naloo baray inaan kor u qaadno oo aan u mahadnaqno oo aan isku dayno inaan isku caawino si aan u guuleysanno; marnaba ha ka xishoonin midba midka kale "
KALSOON: Daniel Sturridge wuxuu leeyahay walaash wayn oo magaciisu yahay Cherelle Sturridge. Waxay tahay sannado 4 ka weyn isaga. Hoos waxaa ku qoran sawirka Cherelle Sturridge iyo John Terry.
Daniel Sturridge oo walaashiis oday ah - Cherelle Sturridge iyo John Terry
XADGUDUB: Daniel wuxuu leeyahay qaraabada 3 magaca Warren, Jordan iyo Ellisha Sturridge.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Markii ugu horraysay, Daanyeel marna looma adeegsan inuu yeesho xiriiro halis ah. Wuxuu inta badan daaweynayaa taageerayaashiisa sawirada iyo fiidiyoowga Instagram, laakiin marnaba sawir kama helin qof dumar ah. Iskuxiridiisa "Off-Pitch Romance" ma aha mid aad u baahsan Sergio Ramos iyo Gonzalo Higuane.
Tani waxay ahayd sida uu u arkayay noloshii uu xiriirka u lahaa inuu noqdo ..."Waxaan jeclaan lahaa inaan bilaabo qoyskeyga. Ma hubo nooca aabaha ee aan noqon doono laakiin waxaan rajeynayaa inaan noqon doono mid qabow. Waxaan rajeynayaa in ilmahaygu awoodi doono inuu iiga sheekeysto wax walba. Taasi waa nooca qofka aan ahay, waana nooca xiriirka aan rajeynayo in aan la yeesho ilmahayga.
Later on, tani waxay ahayd waxa dhacay !!
Taageerayaasha halkaasoo naxdin ku yeeshay markii Daniel Sturridge uu Twitter-ka u soo bandhigay baahida uu u qabo gabadhiisa noloshiisa. Sturridge oo loo yaqaano inuu ku biiro noloshiisa badan ee warbaahinta bulshada, iyo xiriirka joogtada ah ee taageerayaasha ayaa u sheegay dadka raacsan:
Qaar ka mid ah saacado ka dib markii la isku duba rido, qaar ka mid ah warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday tayada bulshadeed ee haweenka uurka leh ee jecel inay xiriir la yeeshaan isaga. Qaar ka mid ah waxay akhriyaan sida soo socota;
-He waa jir ahaan aad ujecsan yahay - wuxuu ujiraa sidan hoos u dhigo, isaga oo la hadlaya waa sida tababare shakhsi ah!
-He wuxuu kaa qaadi karaa sicir-dhimista subway, ka dib markii uu yahay safiirkooda lambar ah.
-Waxa uu xaqiijiyay inuu heysto dareen wanaagsan oo ku saabsan jilibka ka dib markii uu ka qeyb qaatay tartanka tartanka isagoo kula ciyaara kooxda Liverpool FC Jordon Ibe.
-Wuxuu ku noolyahay nolol maalmeedka xiddigaha sida Tinie Tempah, Pharrell Williams iyo Drake sidaa daraadeed waxaad ku jiri doontaa liiska martida sida midkiisa oo kale!
Waxay ahayd Jourdan Dunn oo udubdhexaad ah oo ugu dambeyntii ku guuleystay wadnaha. Jourdan waa layman Ingiriis ah iyo actress. Waxaa laga helay Hammersmith Primark oo ku taal 2006 waxayna saxiixday Storm Model Management in London wax yar ka dib. Waxay bilowday in ay ka soo baxdo waddooyinka caalamiga ah ee hore 2007.
Jourdan Dunn iyo Daniel Sturridge ayaa si xowli ah u soo kordhay tan iyo markii ay bilaabeen inay la hadlaan. Waxay xiriirkooda sii wadaan inay aad u aamusaan marka laga reebo daqiiqado sidan oo kale ah.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Asalka astaamaha damaashaadka
Dadku waxay yiraahdeen Daniel Sturridge waxa uu helay guuritaan ah sida Jagger.
Mar labaad, dhammaan waxyaabihii ay dadku rabaan inay ogaadaan weerarka, waxa laga yaabaa inay tahay asalka ama macnaha dabaaldegga himilada Jagger. Sturridge wuxuu jecel yahay in uu sameeyo qaab ciyaareedka qoob ka ciyaarka ee masraxa ee Masar hortiisa.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa lagu sharaxay wareysi lala yeeshay majaladda GQ: "Waxay igu soo noqotay markii aniga iyo walaalkay iyo walaalkay ay joogeen gurigeyga. Waxaan ku jirney wax yar oo riwaayad ah oo aan ku ciyaarnay muusikada qaarna waxaan ku dhammeeyay qoob ka ciyaarka. Mar labaad ayaan ku dhammeeyaa in aan ku sameeyo goob joog ah oo ka dibna dadku waxay ahaayeen: 'waa inaad u sameysaa sida dabbaaldeg ah,' ka dibna waa nooca kaliya ee la xaday. "
Taageerayaasha yaryar ayaa ku riyaaqay. Tusaale ahaan hoos ayaa loo arkaa.
Sida laga soo xigtay isticmaalka koowaad, ayaa qoob ka ciyaara Sturridge Jagger waxaa markii hore loo isticmaalay 2004 markii uu U15s ciyaaray kulankii Barcelona ee Nike Premier League. Sanadkii hore 14 wuxuu helay shabakada shabakada, waxaana raacay qoob ka ciyaarka oo uu sameeyay markii ugu horeysay ee garoonka. Inkastoo ay u muuqatay wax yar oo cayriin ah oo qumman waqtigaas. Daanyeel ayaa kor u qaaday.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Dareemka Dharka Dharka
Sturridge waxa uu leeyahay meelo kala duwan oo xiiso leh si uu isku mashquuliyo. Waxa uu leeyahay xishood weyn oo loogu talagalay madow. Waxa uu hubiyaa in uu koofiyadeeyay qaabka ugu fiican ee madadaalada madow mar walba.
Gaar ahaan, taasi waxay ka dhigan tahay in la xiro dhammaan tababarayaasha ugu dambeeya.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Marka a County Derby iyo Arsenal Fan
Sturridge wuxuu taageeri jiray taageerada Derby County markii uu yaraa sababtoo ah adeerkiis, Dean, ayaa u ciyaaray iyaga. Laakiin markii Dean uu ka tagay, Sturridge wuxuu ku bedelay daacadnimadiisa Arsenal.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Diinta
Sturridge waa Christian. Ka dib markii uu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican Premier League bishii, Sturridge ayaa yiri, Waxaan ku dhaaranayaa Masiixa kan i gacangelinaya. "
Diinta ayaa sidoo kale ka ciyaareysa qayb adag oo ku jirta nolosha 24-sano jir, iyadoo Sturridge uu yahay qof diinta masiixiga ah, sida muuqata jumlada u jeedda cirka, isagoo Ilaah ku mahadnaqaya in markhaatiyadu sameeyso markasta oo uu helo shabakada shabakada ee Reds.
Sturridge ayaa u sheegay CNN World Sport markii uu isku dayay in uu wax badan ka badalo arintaas. si uu ugu sharaxo qaabkiisa kuleylka cas ee dhawaanta hadafka hortiisa.
Daniel Sturridge Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -A Charity Giver
Sturridge waxa uu si firfircoon uga qayb qaataa shaqada samafalka, oo inta badan ka caawiya ciyaartoyda dhalinta yar inay kubada cagta ka qeyb qaataan. 2012, markii uu u ciyaarayay Chelsea, wuxuu soo bandhigay € 50,000 League Street, oo ah hay'ad samafal ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ciyaartoyda aan faa'iidada lahayn ee ku baahsan Yurub oo dhan.
2013, Sturridge waxa uu furay aasaaskiisa samafalka isaga oo ku magacawday Portmore, Jamaica, iyada oo ujeedadeedu tahay in lagu caawiyo dhalinyarada ay ku helaan ciyaaraha iyo madadaalada.
Waxa kale oo uu leeyahay Shirkadda Rikoorka Rikoorka Rikoorka.
Adam Lallana Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha